यसरी लिनुहोस् बिना धितो लिन सकिने ओभरड्राफ्ट कर्जा!
Hamro Jamana - हाम्रो जमाना || २०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार
व्यवसाय गर्ने क्रममा अचानक नसोचेको खर्च आउन सक्छ। यस्तो खर्चको लागि कम्पनीको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा समस्या पर्न सक्छ। साथीभाइ वा आफन्तसँग सापट लिने, क्रेडिट कार्डबाट पैसा निकाल्ने, बैङ्कबाट पर्सनल लोन लिने, जस्ता विकल्पहरू पनि सुरक्षित हुँदैनन्। अचानक कर्जा लिँदा एकदम चर्को ब्याजदर तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा अर्को राम्रो विकल्प भनेको ओभरड्राफ्ट कर्जा निकाल्ने हो।
के हो ओभरड्राफ्ट कर्जा?
ओभरड्राफ्ट कर्जा भनेको आफ्नो खातामा भएभन्दा बढी पैसा झिक्न बैङ्कसँग गरिने एउटा सम्झौता हो। ओभरड्राफ्ट कर्जामा बैङ्कसँग निश्चित रकमसम्म ऋण लिन बैङ्कसँग एकमुष्ट सम्झौता गर्न सकिन्छ। यो सम्झौता एकपटक गरेपछि पैसा चाहिदा कर्जा सुविधा उपभोग गर्न मिल्छ। पटकपटक सम्झौता गर्न पर्दैन।
यो कर्जा के प्रयोजनको लागि लिन सकिन्छ?
यो कर्जा विशेषतः छोटो समयको लागि चलायमान पुँजी (working capital) को आवश्यकता पुरा गर्न लिने गरिन्छ। अचानक आइपरेको दायित्व जस्तै सामान आपूर्ति गर्ने व्यक्ति (supplier) लाई पैसा दिन, आदिको लागि यो कर्जा लिन मिल्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र यो कर्जा लिन पाइने भने पनि अहिले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिने क्रम बढ्दो छ।
कर्जा लिने प्रक्रिया कस्तो छ?
बैङ्कमा खाता भएको व्यक्ति भए
सुरुमा तोकेको कागजातहरूसहित कर्जाका लागि निवेदन दिनुपर्दछ।
खातावालको व्यक्तिगत चरित्र, योग्यता, व्यवसायको पुँजी र कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता, आदि कुरा बारेमा विश्लेषण गरिन्छ।
यी सबु कुरा जाँच गरे पछि साथै सबै नियम र सर्त पुरा गर्न सक्ने कुरा प्रमाणित भए मात्र कर्जा प्रवाह हुन्छ।
यदि बैङ्कमा खाता छैन भने
तोकेको विभिन्न कागजातहरूसहित कर्जाका लागि निवेदन दिनुपर्दछ।
यति पछि बैङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ।
यसपछि तपाईँले धितो राख्न चाहेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरिन्छ।
फेयर मार्केट भ्यालु अर्थात् प्रचलित बजार मूल्य र सरकारी मूल्याङ्कनको औसतका आधारमा धितो राख्न खोजेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुन्छ।
सो मूल्याङ्कनको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिइन्छ।
सेवा शुल्क लगायत अन्य आवश्यक शुल्कहरू खातामा जम्मा गर्नुपर्छ।
कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि धितो राखिने घर/जग्गा बैङ्कको नाममा दृष्टि बन्धक तथा रोक्का गरिन्छ।
यो सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि कर्जा प्रवाह हुन्छ।
कति अवधिको लागि लिन मिल्छ?
छोटो समयको लागि मात्र यो कर्जा लिन पाइने हुँदा ३ महिनादेखि बढीमा १ वर्षसम्मको लागि मात्र लिन मिल्छ। तर एउटा कर्जाको दायित्व पुरा गरेर अर्को कर्जा नवीकरण भने गर्न सकिन्छ। यसका लागि बैङ्कले ऋण लिने व्यक्तिलाई कतिको विश्वास गर्छ भन्नेमा भर पर्छ।
ब्याजदर कति हुन्छ?
धेरै जसो बैङ्कमा यो कर्जाको ब्याजदर ८% देखि १३% सम्म हुन्छ। आफूले लिने कर्जाको रकम र समयको आधारमा ब्याजको रकम थपघट हुन्छ।
तर कुनै कुनैमा यो भन्दा धेरथोर फरक पनि हुनसक्छ।
बैङ्कमा विश्वासिलो खाता जस्तै चल्ती खाता, तलबी खाता वा मुद्दती बचत खाता भएका व्यक्तिले धितो राख्नु पर्दैन। ओभरड्राफ्ट सुविधा भएका खातावालहरूले पछि व्याजसहित पैसा फिर्ता गर्ने गरी आफूलाई आवश्यक परेको पैसा लिन सक्छन्।
तर कर्जा लिन खोजेको बैङ्कमा खाता छैन भने धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। साथै कुनै कुनै बैङ्कमा खाता भए पनि धितो राख्नुपर्ने हुनसक्छ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र यो कर्जा लिँदा ठिक हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कले प्रयोजन नखुलेको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई बिस्तारै कडाइ गर्दै लगेको छ। कुनै पनि बैङ्कबाट कर्जा निकाल्नु अघि कर्जा कसरी तिर्ने र के को प्रयोजनको लागि लिने जस्ता कुरा निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र लिनुपर्छ।
स्रोत: हिमालयन बैङ्क, मेगा बैङ्क, एनसीसी बैङ्क, नबिल बैङ्क, सिटिजन बैङ्क, ग्लोबल आइएमई बैङ्कको वेबसाइट